I-China igadi yelanga yangaphandle yokukhanya yendlela yesigxobo seglasi yentsimbi engenamanzi ekhokelela ekukhanyeni kwamanzi kwipatio yeyadi abavelisi kunye nabanikezeli | Kasem
igadi yelanga yangaphandle ukukhanya kwendlela isikhonkwane seglasi yentsimbi engatyiwayo ekhokelela ekukhanyeni kweyadi yepatio engenamanzi
Umbane wegalelo(V): 2V
Isibane esiLuminous Flux(lm): 200lm
I-CRI (Ra>): 100
Ubushushu bokusebenza(℃): 10 - 55
UBomi bokusebenza (Iyure): 20000
Isibane soMzimba weMpahla: intsimbi engenasici
IP Umlinganiselo: IP44
Indawo yemvelaphi: eTshayina
Inombolo yoMfanekiso: KADC-03
Igama leMveliso: Isibane soMhlaba (Isibane saseGadini)
YAMELA UKUKHANYA KWEKHRISTU:Isitiya sethu seglasi sikhanyisa ixabiso lemali kunesibane seplastiki. Iglasi ilungile ekugqithiseni ukukhanya ukuya kuthi ga phezulu, njengekristale ekucaceni nasekuqaqambeni. Izibane zelanga zangaphandle zokuhombisa zenza ipateni entle ecacileyo, yongeza ukugqiba kwibala lakho lepatio. Ubukhazikhazi Ungaze Uthathe Ubusuku! Umthunzi weplastiki ulungele ukuqhekeka kunye nokunciphisa ukukhanya kokukhanya kwixesha elide ngenxa yemozulu embi. Tyala imali ngakumbi, ukuKhanya ixesha elide, iYadi iyamema ngakumbi!
UKUKHANYA OKUPHEZULU, UBOMI OBUDENI BEBHETRI:Ukuqaqamba kokukhanya kwe-SMD ziilumens ezili-10, KUKHANYA ngakumbi kunezibane eziqhelekileyo zelanga ngaphandle. Indlela yethu yokuhombisa izibane ikhanyisa igadi yakho ukuya kuthi ga kwiiyure eziyi-10-12 emva kokutshaja ngokupheleleyo iiyure ezi-6-8. Iipaneli ezinkulu zelanga kunye namazinga aphezulu okuguqula amandla elanga aqinisekisa ukuba ibhetri itshaja ngokukhawuleza. Ibhetri ephezulu ye-600mAh ehlawulekayo iqinisekisa ixesha elide lokukhanya. Inkqubo ekrelekrele yokulawula ikhusela ibhetri ekutshajisweni nasekukhutshweni kakhulu ukuze ibhetri isetyenziswe ixesha elide.
IGLASI & NENKANTSI ENGQINQIWEYO & UNGAZE UBOYIKILE IMIZULU EGAQILEYO:Enkosi kwintsimbi engatyiwa, iglasi yeprimiyamu kunye ne-IP65 yokungangeni manzi, izibane zokuqhuba eziqhutywa lilanga ngaphandle zimelana nazo zonke iintlobo zemozulu ukuze zisetyenziswe ngaphandle kwamaxesha amaninzi. Akukho maxhala ngemvula, ikhephu, iqabaka okanye ubushushu obuphezulu. I-anti-rust coating insimbi engenasici iyasebenza ekuthinteleni ukhukuliseko oluhlaziyayo. Xa kuthelekiswa nabanye, izikhonkwane zethu zomhlaba eziphuculweyo ezenziwe ngeplastiki ye-ABS zixhotyiswe ngohlobo olutsha loyilo, zibonelela uzinzo kunye nokomelela okungcono.
UKUFAKEKELA KWAMAHHALA OKUZITHINTELA/KUZIZEKELELE/KUVALE:Ngaba unengxaki yocingo xa ufaka izibane zendlela ngaphandle? Kuya kufuneka uzame le ndlela yokuhamba inikwe amandla elanga! Zifake kwimizuzwana nje ngokubeka izikhonkwane emhlabeni kwaye ufumane ukuguquguquka apho uzibeke khona. Zizilayita ngokuzenzekelayo ebusuku kwaye zicime ngonyezi ngokungenisa ukukhanya okungqongileyo. Iingcebiso: Qinisekisa ukuba akukho nto ifihla izibane zakho zelanga kwaye uzibeke elangeni eligcweleyo iiyure ezili-14 phambi kokuba uqalise ukufakela.
100% UKWANELISA UMTHENGI OKUTHEnjisiweyo:Ungaze usebenzise iibhetri eziphelelwe lixesha. Sinikezela ngenkonzo yomxhasi we-1 ukuya kwi-1 kunye newaranti yeenyanga ezili-18, ngoko ke nawuphi na umbuzo malunga ne-solar landscape izibane zingangeni manzi. Nceda ungathandabuzi ukuqhagamshelana nathi. Iingcebiso: Uninzi lwezibane zegadi ezisebenza ngelanga zithatha umndilili weeyure ezisi-8 ukutshaja ngokupheleleyo, ngoko ke usenokungakwazi ukusebenzisa izibane zakho iintsuku ezimbalwa ukuba uhamba kwithuba leentsuku ezimnyama. kunye nemozulu emdaka.
Ipateni yezithunzi ezintle
Uyilo olulodwa, vumela ukukhanya kukhukulise indawo, ngelixa udala iipateni zethunzi ezintle kwinkqubo.
IP 44 ingenamanzi, ilungele ukusetyenziswa ngaphandle, akukho maxhala malunga nemvula, ikhephu, iqabaka. Yenziwe yaqina kwaye yatywinwa yaqina.
Ixhaswe ngamandla elanga, iphaneli yelanga ifunxa ilanga elithe ngqo nelizeleyo emini ukutshaja ibhetri, izibane zingahlala iiyure ezisi-8 okanye ngaphezulu ebusuku.
Kutheni ukhetha isibonisi seglasi?
Izibane zeGlasi zeSolar Ngaphandle, Indlela eKhanyayo yeSolar Pathway ukukhanya okuziSebenzelayo/Ukucima izibane zeGadi eziZibane zeSola ezingangenwa ngamanzi, intsimbi engatyiwayo ye-LED yoBume bendawo yokuKhanya kweYadi
* Ubungakanani kunye neglasi engagqwaliyo enkulu / intsimbi engatyiwayo: imilinganiselo yokukhanya yelanga yegadi ye-16.54 "ubude x 4.72" ububanzi.
* I-Wireless Solar Pathway Light ene-auto sensor eyenziwe ngentsimbi engatyiwa ngamanzi enomthunzi weglasi yedayimani engangeni manzi ekuvumela ukuba usebenzise esi gadi siqaqambileyo sikhanya ngaphandle ngokusisigxina. Umgangatho wangoku weMetal kunye neGlasi yomgangatho wokuhamba kwamandla elanga kwipatio yegadi kunye neyadi yangasemva ingcono kakhulu kunokukhanya kwendlela yelanga eyenziwe ngeplastiki.
Ngaphambili: Isibane selanga esiphathwayo sesolar isibane esiphathwayo sesolar esinefuthe emhlabeni izibane zangaphandle zesolar ezikhokelela ekungeneni kwamanzi
Okulandelayo: Izibane zeSolar Ground 8 Izibane ze-LED zeGadi yeSolar Izibane zaNgaphandle zeSolar zeDisiki eziKhuselekileyo kwiPathway Yard Walkway Patio Lawn Path
Izibonisi zeRadar ezingangeni manzi Ip65 30W 60W 90W 120W ...
Amanzi aKhalayo aNgaphandleNgaphandleNgaphandle kwaNgaphandle...
isibane solar esiphathwayo solar power isibane sol...
Ukonga umbane ngaphandle IP65 isibane sesitrato selanga...